Nubia Z20 na-aga ịga gọọmentị na nkwado maka ngwa ngwa ngwa ngwa 30-watt | Gam akporosis
Nubia Z20 na-aga ịga gọọmentị na nkwado maka ngwa ngwa ngwa ngwa 30-watt
Anyị na-ezute nanị ụbọchị abụọ mgbe Nubia Z20 amalite na ahịa. Ikekwe China bụ ọdụ ụgbọ mmiri mbụ ya, yabụ mba ndị ọzọ ga-anata ya ma emechaa. Ka anyị buru n'uche na onye nrụpụta China lekwasịrị anya na ahịa a karịa nke ọzọ, gịnị kpatara na, ọ bụrụ na ọ bụ ngalaba kachasị na ya na ZTE na-arụ ọrụ aka, ụlọ ọrụ nne na nna ya?
Anyị emeela ka ekpughere anyị niile atụmatụ na nkọwa nke a ọzọ elu-arụmọrụ ama, ma ugbu a, anyị enwetawo ozi ọhụrụ banyere ya, nke anyị hụburu na mbụ ma nke anyị enweghị ihe ọmụma zuru oke banyere ya. Gịnị ka anyị na-ekwu? Ọfọn, nke ọma, nke ya ngwa ngwa odori technology.
Agencylọ ọrụ asambodo ndị China bụ 3C ewerela Nubia Z20 iji nyochaa njirimara ya ma kwado ya 30W ụgwọ ngwa ngwa. Ngwaọrụ nke, dị ka ọ dị, pụtara na nchekwa data nke ụlọ ọrụ aha ya bụ n'okpuru koodu nlereanya NX627J.
Na nkọwa zuru ezu, ndepụta ahụ gosipụtara nke ahụ Nubia NX627J smartphone chaja NB-A930-USBA-1 chaja na-akwado ihe ndị a kpọtụrụ aha na mbụ. N'iji ya tụnyere, Red Magic 3 smartphone na-egwu egwu, nke nwere batrị 5,000 mAh, na-akwado ngwa ngwa 27 W, yabụ na ị nwere echiche.
Banyere ihe a na-atụ anya ya, Nubia Z20 ga-anabata ndị Snapdragon 855 site na Qualcomm, SoC nke nwere ugbu a nwanne nwoke na-egwu egwuregwu, onye na-abụghị onye ọzọ Snapdragon 855 Plus naanị mara ọkwa. Ọnụ ahụ ga-enwekwa ihuenyo abụọ, nke a ga-enwe na isi ihuenyo 6.42 inch OLED na ihuenyo azụ 5.1-inch.
Nubia Z20 ga - enwe ike idekọ vidiyo na 8K
A na-atụ anya na ọ ga-abịarute ebe nchekwa RAM na ROM nke 6 + 128 GB, 8/256 GB na 12/512 GB, yabụ anyị ga-enwe ụdị dị iche iche ịhọrọ site na, ha niile na ọnụahịa ha. Naanị ụbọchị abụọ ka anyị ga-ama ma kwado nkọwa niile fọdụrụ na mkpanaka ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nubia Z20 na-aga ịga gọọmentị na nkwado maka ngwa ngwa ngwa ngwa 30-watt
Samsung ga-eji AMD Radeon eserese na ekwentị ya